तिमीहरु मे’रा लागी म’र्यौ’ भन्दै जन्म’दिएका बुवा’आमाले नै ४ छोरा’छोरीलाई अल’पत्र छाडे (भिडियो हेर्नुस्) – live 60media
तिमीहरु मे’रा लागी म’र्यौ’ भन्दै जन्म’दिएका बुवा’आमाले नै ४ छोरा’छोरीलाई अल’पत्र छाडे (भिडियो हेर्नुस्)
September 11, 2020 admin	0 Comments
काठमाडौ । केही दिन देखि एउटा भिडियो भाइरल भइरहेको छ । भक्तपुरमा आमाबुवा भएर पनि टुहुरा बनेका चार बालबालिकाहरुको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा भिडियो सार्वजनिक भएको छ । केही महिना देखि भक्तपुरको एउटा कोठामा लकडाउनका समयमा भोकै बसेका चार बालबालिकाले धेरै महिना पछि आफ्नो आमालाई फेला पारेका छन् ।
संगै हुँदा पनि कहिल्यै आमाबुवाको माया नपाएका उनीहरुले आमालाई अर्कै पुरुषसंग देख्दा उनीहरुलाई अचम्म लाग्यो । आमा त्यहाँ छन् भन्ने थाहा पाएर भेट्न जाँदा आमाले माया गर्नुहुन्छ होला भन्ने लागेको थियो तर भेट हुँदा पनि आमाले माया गर्दिन भनेको सुनेपछि छोराछोरी निकै दुखी भएका छन् ।
४ छोराछोरीलाई छोडेर आमा र बुवा अर्कै टिपेर हिडेपछि यि बालबालिकाको बिचल्ली भएको थियो । भिडियोमा यिनीहरुको अवस्थाको बारेमा सार्वजनिक भएपछि सहयोग आउन थालेको छ । अहिले उनीहरुको कोठामा आधारभुत बस्तुहरुका जम्मा हुन थालेको छ ।
यस्तै बेलामा उनीहरुले आमालाई पनि देखे । तर पनि आमाले माया गर्दिन भनेर तिरस्कार गरेपछि बालबालिका थप दुखि भएका छन् । सबैभन्दा दुखी माइली छोरी भएकी छन् । उनी आमालाई भेटेदेखि नै आँखा ओभाएका छैनन् ।
तीन छोरी र एक छोरालाई छोडेर गएका अभिभावकहरुलाई जेठो छोरीले भावुक सन्देश दिएकी छन् । जेठी छोरी उर्मीलाले उनले भनेकी छन्, बाबा र ममीका कारण हामीले यति धेरै दुख पार्यौ यो संसारमा भएका बाबा आमाले आफ्ना छोराछोरीलाई यसरी अलपत्र पारेर नछोड्नुहोला ।
माइली छोरी मुनाको आमाले नाम समेत लिइनन् । त्यो सम्झेर अहिले पनि उनी दुखी छन् । आँखा ओभाएका छैनन् । आमाबुवा संगै हुँदा पनि बुवाले मुनालाई माया गर्ने भएकाले बाबाको प्यारी छोरी भन्दै संधै हे ला गर्ने गरेको जेठी छोरीले बताएकी छन् ।
← अस्पतालले भर्ना लिन नमान्दा गर्भवती ३० वर्षीया बिमलाको मृत्यु, जन्मीएको छोराको पनि गयो ज्यान !
सपनामा नागदेवताको दर्शन पाउनु भयो भने ,यस्ता हुन्छन संकेतहरू ॐ लेखेर एक Share गर्नुस अधुरो काम बन्नेछ। →
असार ०१ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल
नेपालगञ्जमा फेरी घट्यो यस्तो अनौठो घटना,बिवाह अघि नै सबै सिकाइदिन्छु भन्दै.
मैले मेरो बुवाका कारण अहिलेसम्म विहे गर्न सकिन्, ४६ वर्षपछि एकता कपूरले गरिन् गम्भीर खुलासा
लोकप्रिय नायक दिलिपकी छोरी छिन् सारै राम्री, फिल्ममा नआउँदै सुन्दरताको चौतर्फी चर्चा
खुशिको खबर सुध्रियो मोडल निशा घिमिरेको स्वास्थ्य,देखियो यस्तो परिवर्तन
काठमाण्डौ बाट बाहिरिन जान नमिल्ने खबरले लाखौको दशैं खल्लो हुने सम्भावना बीच आयो नया खुसीको खबर। असोज २० गतेबाट यस्तो हुँदै,पुरा पढ्नुहोस 25.1k views
कल्पना दाहालको बिबाह बधाईको घुइँचो रमेश प्रसाइ संग म बिहे गर्छु भनेपछि यस्तो तयारी भयो (हेर्नुहोस भिडियाे) 6.9k views
तल्लो पेट दुखेर अस्पताल पुगेकाको जाँच गर्दा डाक्टर नै च*कित हुने देखियो विश्वकै दुर्लभ घ*टना 6.6k views
भर्खरै हेर्नु कसैले नसोचेको धेरै राम्रो कुरो आयो अब केहि हुन्छ 6.1k views
सडक दुर्घटनामा तेजाको निधन, सुपरस्टार शव हेर्न पनि गएनन् 5.5k views